Photo Collage Max 2.1.1.6 + Patch...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ Photo Collage Max 2.1.1.6 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!ကျွန်တော် အလုပ်များနေလို့ Post မတင်ဖြစ်တာပါ...! အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ ကောင်လေးကတော့ ဓါတ်ပုံတွေ ကလိတာ ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်...! ပုံတွေကို amazing collages, cards, calendars စတာတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်...! သုံးရတာလည်းလွယ်ကူ ပါတယ်...! ကျွန်တော် Patch ဖိုင်လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်...!ကလိချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
" ဒီမှာယူသွားပါ...! ( 34. 19 MB )
No Response to "Photo Collage Max 2.1.1.6 + Patch...!"